Fernando Torres: Waxaan U Xiisay Ciyaaryahankii Aan Waa Ahaan Jiray. - jornalizem
Fernando Torres: Waxaan U Xiisay Ciyaaryahankii Aan Waa Ahaan Jiray.
Fernando Torres ayaa shaaca ka qaaday inuu maskax ahaan ku dhibtooday inuu noqdo xiddig kursiga keydka u fadhiya Chelsea.
Laakiin weeraryahanka reer Spain ayaa sheegay inuu weli doonayo inuu tuso Jose Mourinho inuu yahay weeraryahanka uu tababaraha Blues raadinayo xilli ciyaareedka soo socda.
Torres ayaa sheegtay in markii lagala soo wareegayay Liverpool bishii Janaayo 2011 loo soo iibsaday inuu ka garab ciyaaro Nicolas Anelka laakiin islamarkiiba kursiga keydka loo dhaadhiciyay.
Xiddiga ugu qaalisan taariikhda suuqa kala iibsiga Britian ayaana waligiis ka noqonin Stamford Bridge dooqa koowaad ee gooldhaliye, isagoo qirtay inuu ku dhibtooday ciyaartiisa.
“Waxba kama fahamsani wixii dhacay” ayuu u sheegay majalada Faransiiska ee So Foot.
“Waxaan bilaabay inaan isbarano kursiga keydka. Waxaan isku qancinayay inay taasi isbedeli doonto dhawaan. Villas-Boas ayaa yimid ka dibna Di Matteo laakiin mar walba sidii ayay aheyd: maalin waan ciyaarayay maalina ma ciyaareynin.
“Marka aad ciyaareyso, isma weydiineysid sida lagu dareemo kursiga keydka. Waa inaad ku noolaataa kursiga keydka si aad u ogaato waxa ay tahay in halkaas la fadhiyo.
“Marka aad ciyaar galeyso oo aad ogtahay inaadan heysan kalsoonida tababaraha. Marka aad ciyaareyso mark aadan u baranin inaad si joogta ah u ciyaarto. Anaga waxaan dareemay wax qariib ah, waxaan hore ka dareemayaa daal, waan cayilay. Wax tamar ah ma lihi. Waa inaad la dagaalantaa waxyaabo badan si aad uga soo baxdo kursiga keydka. Mararka qaar xitaa naftaada la dagaalanto.
“Maanta waxaan ahay ciyaaryahan ka duwan sidaas laakiin been kuuma sheegayo ciyaaryahankii aan waa ahaa, midkii ku soo bilaabanayay ciyaar walba oo hubaal ay u aheyd, mararka qaar waan u xiisaa kaas. Mararka qaar waxaan hor fariistaa TV-ga waxaana daawadaa goolasheyda, waxaan doonayay inaan fahmo waxa aan sameynayay hada ka hor markii aan wax dhalinayay.
“Waxaana baaritaankeyga ku soo gabagabeeyay, in isbedelka kaliya ee dhacay uu yahay midabka maaliyada. Wax walba waa la qabsiga qaab ciyaareedkeyga kooxda. Waxaa jiray qaab ciyaareedyo igu fiican iyo kuwa aan igu habooneyn.”